Kachin Word | Just another WordPress.com weblog
About Kachin and more
Posted on September 20, 2016 by Drbabyzet
Kachins in Myitkyina raise Kachin national flags
Kachins in Myitkyina raise Kachin national flags at half mast, pray and mourn for the fallen cadets from the Kachin Independence Army’s Military Academy. …[Readmore]
Advocacy ngu ai hpa rai ta
? Advocacy ဆိုတာလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Maran Jawgun ရဲ့ Advocacy ဆိုတာလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မရှင်းတာရှိရင် သူ့မေးပါရှင့်။Advocacy ဆိုတာ သတင်းအချက်အလက် မျှဝေပေးခြင်းထက်…[Readmore]
Washington DC kaw Kachin Alliance Rung hpaw sai
Myenmung US hkring mang ning nan Scot Marciel US state department salang wa hte hkrum sai
Kachin Alliance February 22 at 6:05pm · Kachin Alliance ning baw , mu madu hte myubaw sang ning baw ni Myenmung US hkring mang ning…[Readmore]
BOD and EC Kachin Alliance
Our Vission and A ctivities
Mission The mission of Kachin Alliance is to eradicate human rights abuses suffered by the Kachin ethnic minorities and to promote justice, equality and peace for the…[Readmore]
Kachin Alliance A Labau Kadun
May, 26-27, 2012 hta Amerika na Wunpawng amyu sha ni hku n-na amyu sha lam yan hta ta gindun let grau tang du ai hku rau galaw sa wa lu na matu Kachin Alliance hpe…[Readmore]
Posted on April 10, 2016 by Drbabyzet
ဗမာတစ်ကျပ်၊ ကချင်တစ်ကျပ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ အရာတွေ အများကြီး//Lapmyi sha gaw hpa ndi
Posted on January 4, 2014 by Drbabyzet
Seng Myat Naw Palawng
္ကLet My People Go
ဣသရေလ လူမျိုးတော်အတွက် အဲဂုတ္တုမှာ ကျွန်ခံခဲ့ရခြင်းဟာ သူတို့ဆီက အင်ဂျင်နီယာ၊ စာပေ၊ အနုပညာ ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ဒဿနဗေဒ၊ အစရှိတဲ့ ပညာတွေကို သင်ယူနိုင်ဖို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ဣသရေလ လူမျိုးတော်ကို နိုင်ငံတစ်ခုပေးပြီး လူမျိုးကြီးအနေနဲ့ ရပ်တည်စေချင်တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဗြိတိသျှလက်အောက် ကျရောက်ခဲ့တာ သူတို့ဆီက အများကြီးသင်ယူခဲ့ကြရတယ်။ ဗမာစာသည် တို့စာ၊ ဗမာစကားသည် တို့စကားဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံအောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားကို တတ်အောင်သင်ယူလေ့လာနိုင်ခဲ့တယ်။ အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်ဟာ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် (နု-အက်တလီက ဖွတ်ကြား)။
ကျွန်ခံခြင်း၊ ကျွန်ပြုခံရခြင်းကို ကောင်းတယ်လို့ မဆိုလိုပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မှာ သင်ယူခဲ့ရတာအများကြီး။ အချိန်တန်တဲ့အခါ ကျွန်ပြုခံခြင်းက မလွတ်မြောက်ပဲ နေဖို့ ဘယ်သူက တားနိုင်မှာတဲ့လဲ။ ဘုရားသခင်ချိန်းချက်တော်မူပြီးတဲ့အရာကို မည်သည့်တန်ခိုးကမှ တားဆီးလို့မရနိုင်ပါ။ ပေဖြစ်တဲ့အခါ တူရဲ့အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို လေ့လာထားကာမှ တောလည်ရာခရီးမှာ ခံနိုင်မှာ။
ငါတို့တစ်တွေ (၆၆)နှစ်ဆိုတဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေကျော်ဖြတ်လာတဲ့ခရီးမှာ ကျကျန်ခဲ့တာတွေ၊ ချချန်ခဲ့တာတွေ၊ နောက်ချန်ခံခဲ့ရတာတွေ၊ လှမ်းမယူနိုင်ခဲ့တာတွေ အများကြီး၊ အများကြီးကိုကျန်ပါသေးတယ်။ ဗမာတစ်ကျပ်၊ ကချင်တစ်ကျပ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ အရာတွေ အများကြီး။
အဲဒီအတွက် ငါတို့မှာ လွတ်လပ်ရေးလိုတယ်။ ထွက်မြောက်ခြင်း လိုတယ်။ ခါနန်ပြည်လိုတယ်။ နိမိတ်လက္ခဏာ ဆယ်ပါးပြဖို့ ဒီနေ့ တရားမျှတခြင်းကို လိုလားတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့တာဝန်။
Filed under: Uncategorized | Tagged: kachin |	Leaveacomment »
ဤ လူမျိုး သည် ကျနော့် လူမျိုး
Posted on January 3, 2014 by Drbabyzet
ဤ လူမျိုး သည် ကျနော့် လူမျိုး။
ဤ ဒေသ သည် ကျနော့် ဒေသ။
ဤ တပ်မတော် သည် ကျနော့် တပ်မတော်။
ဤ သယံဇာသ သည် ကျနော်တို့ သယံဇာသ။
အသင် သူစိမ်း သည်
ကျနော့် လူမျိုးကို စော်ကား၊ အနိုင်ကျင့်။
ကျနော့် နယ်မြေထဲ ကျုးကျော်။
ကျနော့် တပ်မတော် ကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်။
ကျနော့် တို့ သယံဇာသ ကို
လောဘ ရမက်တွေနဲ့ မနာလို မက်မော နေရ ပါ သနည်း။ ?????????
URGENT PRESS RELEASE 3rd JANUARY 2014
Posted on January 1, 2012 by Drbabyzet
Lisu kachin Book
KDO yahoo group
Picture of kachin land
World Kachin Google group